सामाजिक सञ्जालमा दिनदिनै अनेक अर्थ लाग्ने तस्वीरहरू अपलोड भइरहेका हुन्छन् ।
शुरुमा हेर्दा अचम्म लाग्ने यस्ता तस्वीरको वास्तविकता थाहा पाएपछि मानिसहरू तीनछक्क पर्छन् ।
पर्फेक्ट टाइमिङ र एंगलका साथ खिचिएका यस्ता तस्वीरले एकचोटि त तपाईंलाई कन्फ्युज गरिदिन्छन् ।
माथिकै फोटो हेर्नुस् । यी महिलाको चारवटा गोडा छन् त ? खासमा यिनी ऐनाअगाडि झुकेकाले चारवटा गोडा देखिएको हो । गोडाबाहेक शरीरका कुनै पनि अंग ऐनामा नदेखिएकाले उनको चारवटा गोडा देखिएको हो ।
यो पुरुषले बिकिनी लगाएको होला त ?
सुगा हो कि करेला ?
युवतीहरूको सही मुद्रा कुन हो ?
महिलाको नाइटो देखिएको हैन, यो त मरुभूमि हो ।
उँटमाथि उँट चढेको हो त ?
छातीभित्र टाउको घुसाएको हैन, स्विटर र टोपीको बनोट अनि रंग उस्तै भएकाले हो ।
हात र गोडाको कम्बिनेसन मिलेको हो ।